Blackmagic URSA နှင့် DaVinci Resolve စတူဒီယိုတို့သည် 'Deranged Marriage' အဆုံးမှအဆုံးအထိလုပ်ငန်းအသွားအလာအတွက်အသုံးပြုသည် | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » '' Deranged အိမ်ထောင်ရေး '' ပေါ်လုပ်ငန်းအသွားအလာရပ်တန့်ဖို့အဆုံးအဘို့အသုံးပြု Blackmagic URSA နှင့် DaVinci ဖြေရှင်းရန်စတူဒီယို
Blackmagic ဒီဇိုင်း ယနေ့ Blackmagic URSA ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ကင်မရာ, ထုတ်လုပ်မှုကင်မရာ 4K နှင့် Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာလာမည့်ရုပ်မြင်သံကြားပြပွဲများအတွက်ရှေ့ပြေးဇာတ်လမ်းတွဲကိုရိုက်ကူးဖို့အသုံးပြုကြသည်ဟုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် "Deranged အိမ်ထောင်ရေး။ " DaVinci စတူဒီယိုဖြေရှင်းလည်း, အဆုံးမှအဆုံးသို့တိုင်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည် အရောင်ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည်တည်းဖြတ်ရေး, Composting နှင့်ပြီးအပါအဝငျ။
DPed, ညွှန်ကြားထား, Written နှင့်အနုမြူ Imaging, Inc နှင့်ဂိုလန်ကုန်းစတူဒီယို၏ Ari ဂေါလန်မြို့တည်းကထုတ်လုပ်, "Deranged အိမ်ထောင်ရေး" အဘယ်သူ၏ America မှာသူမ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း furthering ၏အိပ်မက်သူမ၏ယခုဟောင်းအေးဂျင့်သူမ၏အမေရိကန်ဗီဇာလျှောက်လွှာ bungles လာသောအခါပွားနေကြသည်တစ်ခုအယောင်ဆောင်ဘောလီးဝုဒ်လူငယ်အောက်ပါအတိုင်း ။ သူမသည်သူမ၏ပိုကောင်းတရားစီရင်ခြင်းကိုဆန့်ကျင်ခြင်း, တစ်ဦးကိုယခင်ကစီစဉ်ပေးလက်ထပ်ထိမ်းမြားအပြီးသတ်ဖို့သူမ၏ overbearing မိဘများ '' အလိုဆန္ဒဆန့်ကျင်နေတဲ့ရုန်းကန်သရုပ်ဆောင်နှင့်အတူအတု matrimony orchestrate တစ်ရိပ်ရတဲ့ရှေ့နေများ၏အကူအညီ enlists ။
သင့်ရဲ့ခေါများအတွက်ဒေါ်လာနှင့်ပေါက်ကွဲသံကြီးတစ်ဦးလျှင်အရည်အသွေး၏ "I'ma ကြီးမားသောပန်ကာ Blackmagic ဒီဇိုင်း ထုတ်ကုန်, "Ari ကဆိုသည်။ "ငါသည် 4K ၌ဤစီမံကိန်းကိုမကယ်မလွှတ်ချင်ခဲ့တယ်, ဒါကြောင့် URSA နှင့်ထုတ်လုပ်ရေးကင်မရာ 4K ငါ့အဘို့မှာသဘာဝရွေးချယ်မှုခဲ့ကြသည်။ ကျွန်မကိုလည်း CinemaDNG format နဲ့တစ်ဦးကြီးတွေပန်ကာရယ်, နှင့် Blackmagic ကင်မရာများငါ့ကိုစျေးသက်သာသော 4K RAW ရိုက်ကူးဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ "
Ari အသီးသီး, ထို A နှင့် B ကင်မရာများအဖြစ် URSA နှင့်ထုတ်လုပ်မှုကင်မရာ 4K ကိုအသုံးပြုလျက်, Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာထိုကဲ့သို့သောအမိမြေလုံခြုံရေးဌာနအတွက်ရိုက်ကူးအဖြစ်, တည်နေရာ B ကိုလိပ်ရိုက်ကူးဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ Ari အတွက် URSA သို့ built အရာအားလုံးကြီးရှိခြင်း "commented ။ ငါ "ငါ့ DP မော်နီတာအဖြစ်မော်နီတာနှင့်ကင်မရာကိုလက်ထောက် URSA ရဲ့ 10 အသုံးပြုသော" ဟုအဆိုပါကင်မရာရဲ့5အသုံးပြုသောအာရုံစိုက်ဆွဲထုတ်ဖို့မော်နီတာ။ သူသည်အသံအဆင့်ဆင့်အတည်ပြုဖို့အခန်းတစ်ခန်းကိုဖြတ်ပြီးမှသူတို့ကိုကြည့်ရှုနိုင်သောကြောင့်မြည်သံရောနှော URSA ရဲ့အသံမီတာကိုချစ်၏။ "
Ari လညျးမိမိကင်မရာကရွေးချယ်ရေးအတွက်လတ္တီ၏အရေးပါမှုကိုမှတ်ချက်ချသည်။ "Dynamic အကွာအဝေး ပို. ပင်အရေးကြီးသော resolution ကိုထက်အရေအတွက်ကိုဦးတည်းအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျနော်တို့အပြင်မှာရိုက်ကူးအထူးသဖြင့်လာသောအခါ, ငါတို့အဘို့အရှာဖွေနေခဲ့ရိုက်ချက်များရနိုင်ခဲ့ကြတယ်။ အဆိုပါကင်မရာများကုန်ကျစရိတ်၏အစိတ်အပိုင်းမှာထိုကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်ကြည့်ရှိသည်, "ဟုပြောသည်။ "ကျနော်တို့ကတစ်ဦးနှစ်သက်သဗေဒ, ကောင်းတဲ့အသားအရေတန်ချိန်နှင့်သဘာဝကြည့်နှင့်အတူကယ့်ကိုအရည်အသွေးမြင့်ပုံရိပ်တွေတယ်။ "
ကင်မရာနောက်မှာသူ့အလုပ်အပြင်, Ari လည်း post ကိုကြီးကြပ်သူများနှင့် colorist, အဖြစ်အယ်ဒီတာများတစ်ဦးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်, သူ DaVinci တစ်ခုလုံးကိုပို့စ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်စတူဒီယိုဖြေရှင်းရွေးချယ်ခဲ့သည်။ "ဖြေရှင်းရန်အလွယ်တကူ 4K RAW file တွေကိုကိုင်တွယ်, ငါက start ကနေ finish ကိုမှဖြေရှင်းရန်၌ နေ. အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အချိန်မရှိဘူးခဲ့တာ transcoding သုံးစွဲခြင်းသို့မဟုတ်မီဒီယာပိုကောင်းအောင်။ round ဖြေရှင်းရန်အတွက် tripping သင်လမ်းကြောင်းသို့သွားလိုလျှင်သည်ကြီး, သင်မူကားဖြေရှင်းရန်အတွက်အပြည့်အဝ NLE အခါ, ကွဲပြားခြားနားသောအစီအစဉ်များမှ switching အပိုခြေလှမ်းများနှင့်အချိန်ဖြုန်းဖန်တီး, နှင့်အချိန်ပိုက်ဆံဖြစ်ပါတယ် "ဟု Ari ကဆိုသည်။
"ငါတကယ်ဖြေရှင်းရန်ရဲ့ဒြပ်ပေါင်းများကလစ်များနှင့်အပြောင်းအလဲလုပ်ပြန်အချိန်ဇယားသို့ချဲ့ထွင်ရန်စွမ်းရည်ကြိုက်တယ်," Ari ဆက်ပြောသည်။ "ကျွန်မကိုလည်းအားလုံးအစိမ်းရောင်မျက်နှာပြင်ဖွဲ့စည်းမှုများအတွက်ဖြေရှင်းရန်ရဲ့ 3D keyer ကိုအသုံးပြုလျက်, 3D keyer ရဲ့ယိုဖိတ်မှုဖိနှိပ်မှုဟာအခွက်တဆယ်ပေါ်မဆိုကျန်နေတဲ့အစိမ်းရောင်ယိုဖိတ်မှုဖွင့်သန့်စင်။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါအလွှာရောနှောနှင့်အဓိကရောနှောပေါင်းစပ်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, ငါရိုက်ချက်များဖြင့်ဆောင်ရွက်ရပါသည်ကယ်နှုတ်သောခွင့်ပြုသည့်ရှေးရိုးစွဲကြီးဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့ Matte ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါကင်မရာများကျနော်တို့လွယ်ကူသောနှိပ်ရင်တွေ့နိုင်နှင့်အပို resolution အတွက်လုပ်အတွက်ဆွဲထုတ်သည့်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလာကြတယ်နှင့်လိုအပ်တဲ့အခါ reframe ခွင့်ပြုခဲ့၏။ "RAW အတွက်အစိမ်းရောင် screen ကိုရိုက်ကူးထိုကဲ့သို့သောကောင်းတစ်ဦးအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်
Ari အဆိုပါထုံးစံခေါင်းစဉ်ဖြေရှင်းရန်အတွက်ကိုလည်းရှိုးစာသားခရက်ဒစ်ပြီးပါကအဘို့အလွန်အသုံးဝင်ခဲ့ပါတယ်, ထိုသို့လိုအပ်တဲ့အခါစာသားကိုကိုက်ညီခြင်းနှင့်ပြုပြင်မွမ်းမံရန်လွယ်ကူခဲ့ပါတယ် feature "ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ ငါပင်နောက်ပိုင်းတွင်ဖြေရှင်းရန်အတွက်ရွေ့လျားမှုဂရပ်ဖစ်မှသေးငယ်တဲ့ချိန်ညှိပြုလေ၏။ သန်နိဋ်ဌာနျမသာအစွမ်းထက်နှင့်ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည်ဘက်မှာ, ဒါပေမယ့်လည်းတည်းဖြတ်ရေးနှင့်ပြီးဘက်မှာနောက်ဆုံးပုံရိပ်ကိုထိန်းချုပ်ရန်လွယ်ကူစေသည်။ "
Blackmagic URSA, ထုတ်လုပ်မှုကင်မရာ 4K, Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ, DaVinci ၏ကုန်ပစ္စည်းဓါတ်ပုံစတူဒီယိုအပေါင်းတို့နှင့်တကွအခြားအဖြေရှင်း Blackmagic ဒီဇိုင်း ထုတ်ကုန်မှာရရှိနိုင်ပါ www.blackmagicdesign.com/press/images ။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ post ကိုထုတ်လုပ်မှု တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2016-06-30
ယခင်: ခင်မှာ & ကျောင်း / နွေရာသီအစီအစဉ်ဆိုက်ကိုလက်ထောက်ပြီးနောက်
နောက်တစ်ခု: Sony ရဲ့ Memnon ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူအင်ဒီယားနားတက္ကသိုလ်ရဲ့ကြီးမားတဲ့ဒီဂျစ်တယ် Initiative